🥇Best Forex Brokers ngeMini kunye neMicrosoft Akhawunti ngoJanuwari 2022 | Funda 2 Urhwebo
Abarhwebi be-Forex abagqwesileyo abaneMini kunye neMicrosoft Akhawunti ye2021
Phantse wonke umntu okwiplanethi yomhlaba uyazi ukuba yintoni urhwebo lwe-forex. Kodwa, ngeentlobo ezininzi zeakhawunti ekunikezelweni, ukwazi apho ungaqala khona kunokudideka.
Ukuba usaqala kwihlabathi lokurhweba ngemali, unokufuna ukuqaphela iakhawunti encinci okanye encinci yeakhawunti. Njengoko igama libonisa, oku kukuvumela ukuba urhwebe ngexabiso elincinci kakhulu.
Ngamanye amagama, awusadingi mali ininzi ukuqala ukurhweba kwimarike ye-forex, Ngapha koko, abathengisi banokuhlala bethengisa ngemali encinci njenge- $ 50.
I-akhawunti encinci ye-Forex ijongene neeyunithi ezincinci zeeyunithi ze-1,000, ke zihlala zilula ukuqala ngazo-ngakumbi kubarhwebi abatsha. Iakhawunti ye-mini mini yokurhweba ngamaxabiso amancinci, ihlala iyunithi ye-10,000.
Ukuba ukuthengisa okuncinci okanye okuncinci kwe-forex kuvakala ngathi unomdla kuyo, emva koko uye endaweni elungileyo. Siza kuqhuba ngayo yonke into oyifunayo malunga neeakhawunti ze-forex ezincinci kunye nezincinci, ukuba zisebenza njani, kunye nendlela yokufumana umrhwebi olungileyo obabonelelayo.
Yintoni iAkhawunti yeMini / iMicrosoft ye-Forex?
Ngokusisiseko, iakhawunti encinci ye-forex yiakhawunti ye-forex evumela abatyali zimali ukuba bathengise kwintengiso ngexabiso elincinci lokuthengisa kunye nezikhundla zesayizi. Ukurhweba nge-mini okanye ngeakhawunti encinci kunciphisa umngcipheko kunye nokunciphisa ilahleko enokubakho. Njengoko ngokungathandabuzekiyo uqikelele, iakhawunti encinci yincinci encinci kuneyona mini. Okungakumbi kuloo ngomzuzu.
Ngokubanzi, iiakhawunti ze-forex zinikezelwe ngokobukhulu beekhontrakthi ezintathu: ezincinci, ezincinci kunye nomgangatho:
Iakhawunti encinci ivumela abatyali mali ukuba bangene kubungakanani beekhontrakthi zeeyunithi zeasethi ezili-1,000 XNUMX.
Kwimeko yeakhawunti encinci, umntu unokurhweba ngeeyunithi ezingama-10,000.
Ngelixa iikhontrakthi ezisemgangathweni zisebenza kwiiyunithi ezisisiseko semali eyi-100,000.
Ngendlela efanayo, umbhobho onokubakho (ipesenti yenqaku) umvuzo, okanye ixabiso lokuhamba liphantsi, ngeesenti ezili-10 zeemicro kunye ne-1 yedola kwitikiti ngalinye; endaweni ye- $ 10 esemgangathweni.
Ezinye iisayithi ngoku zibonelela ngeakhawunti encinci 'nano', evumela abantu ukuba bathengise amaqashiso e-forex yeeyunithi ezisisiseko ezili-100 ($ 0.01).
I-Forex Mini kunye neMicrosoft Accounts zisebenza njani?
Kuyakuthiwa ukuba iiakhawunti ezincinci nezincinci ze-akhawunti ikakhulu zitsale abatyali zimali abatsha okanye abangenamava, ngenxa yesayizi encinci yesivumelwano. Oku kuyavakala, njengoko unokurhweba ngaphandle kokufumana ilahleko enkulu. Oku kunokuba luncedo kakhulu kubarhwebi abasafunda indlela yokuthengisa i-forex.
Ngokwesiqhelo bobabini abanini-akhawunti abancinci kunye nabancinci banethuba lokungena kwizixhobo ezifanayo zokurhweba kunye neemarike njengabanini beakhawunti (iitshathi, uhlalutyo, inkxaso kubathengi, amaqonga, njl.).
Njengoko besesitshilo, iiakhawunti eziqhelekileyo ze-forex zilawulwa kuthengiso oluninzi lweeyunithi ze-100,000. Ngaxeshanye, abathengisi beakhawunti encinci kufuneka bafake iiodolo eziphindaphindayo zeiyunithi ezili-1,000, kwaye iiakhawunti ezincinane mazingenise iiodolo zeeyunithi ezingama-10,000.
Ubungakanani obuncinci beqashiso bukwenza ukuba abathengisi abanamava babeke iiodolo ezahlukeneyo, ngokwandisa inani leemali ze-incognito ngaphezulu kokukhethwa kweeperi zemali. Ngapha koko, abatyali zimali abatsha banokuwulawula ngcono umngcipheko wabo, ngenxa yesayizi encinci yokubheja.
IiAkhawunti zeMini zeM Forex kunye neePips
Imarike yotshintshiselwano lwangaphandle ithengisa imali ngesicatshulwa sasaza Ixabiso, umzekelo, i-EUR / USD 1.200. Lonke utyalomali luqikelela ukuba imali iya kutshintsha (ngokubhekisele kubudlelwane bemali). Utshintsho lwaziwa njengokuhamba kombhobho.
Kumzekelo ongentla, umtyalomali uqikelela ukuba isiseko semali (i-euro) iya kunyuka ngexabiso xa kuthelekiswa nemali yexabiso (i-US dollar kule meko). Ixabiso lesikowuteshini libonisa iindawo ezi-4 zokugqibela (.2000). Nangona kunjalo, xa kufikwa kwiYen yaseJapan, ireyithi iboniswa kwiindawo ezi-2 zokugqibela, umzekelo, 123.62.
Ngokubanzi, imarike ye-forex yemilinganiselo yokutshintsha kwexabiso ngokusebenzisa iipipi, ukuya kwindawo yesine yedesimali. Umbhobho umele nolona tshintsho luncinci lunokubakho kwixabiso lemali. Ukutshintshwa kwexabiso kulinganiswa ngamaqhezu, oko kuthetha ukuba imali efunyenwe okanye elahlekileyo kurhwebo lwesibini lwemali iya kuhlala incinci. Yiyo loo nto i-100, i-1,000, i-10,000 kunye ne-100,000 yobungakanani bemilinganiselo (ibhloko encinci yemali).
Ngenxa yoko, iakhawunti yabarhwebi be-forex yoku ngokubala iiyunithi zemali kwiisayizi ezininzi, ekwabonelela ngotyalo mali. Izinga lombhobho liya kutshintsha ngokusekwe kwiiperi zemali othengisayo kunye nexabiso lemali esisiseko.
Ukuba iakhawunti yokurhweba kwangaphambili isebenzisa i-USD- enye ipip yi- $ 0.10 yeakhawunti encinci, i- $ 1 yeakhawunti encinci kunye ne- $ 10 yeakhawunti esemgangathweni. Ukuba umzekelo, imali eqikelelweyo yiYen yaseJapan, umbhobho uya kwahluka ngokwelo nqanaba.
I-Forex Mini kunye neMizekelo yeAkhawunti encinci
Ubungakanani obuqhelekileyo beqashiso lomrhwebi ziiyunithi ezingama-100,000. Oku kuthetha ukuba ukuze uthenge ngaphandle kokunyusa umtyali mali kufuneka isixa esikhulu semali.
Umzekelo, masithi kumzekelo wethu wangaphambili urhwebo lwe-EUR / USD kwi-1.2000, i-euro inyukela kwi-1.2075 xa urhwebo luvalwa. Umbhobho kule meko ziiyunithi ezingama-75 (1.2000 - 1.2075 = .0075).
Iakhawunti encinci ye-forex: 1,000 x .0075 = $ 7.50 yeenzuzo
Iakhawunti encinci ye-forex: 10,000 x .0075 = $ 75 iinzuzo
Iakhawunti esemgangathweni ye-forex: 100,000 x .0085 = $ 750 iinzuzo
Okulandelayo, masicinge ukuba urhwebo lwe-euro luyehla luye kwi-1.1990, oku kubonisa ilahleko yeepips ezili-10.
Iakhawunti encinci ye-forex ye-1,000 x .0010 = $ 1 ilahleko
Iakhawunti encinci ye-forex 10,000 x .0010 = $ 10 ilahleko
Iakhawunti esemgangathweni ye-100,000 0010 x .100 = ilahleko ye- $ XNUMX
Abarhwebi ngokwesiko bathambekele ekunikezeleni abarhwebi amandla kuwo onke ama-akhawunti e-forex, ikakhulu ukwenza ukuba abatyali mali bathathe inxaxheba kuthengiso oluphezulu lomngcipheko ngokufumana imali encinci.
Kwisifundo sokunyusa, umthengisi we-forex uza kutyala imali kumtyali mali ngokwaneleyo ukuze athathe isikhundla esikhulu. Kule meko, umrhwebi ngekhe abe nakho ukuthatha isikhundla kunye nemali kwiakhawunti yabo.
Umzekelo, umthengisi we-forex onika isibonelelo se-100: 1 unokuvumela umtyali mali nge-akhawunti encinci ukuba ayalele isayizi enye ye-100,000 ubukhulu kunye nokukhutshwa kwemali kwiiyunithi zemali ezili-1,000 XNUMX. Khumbula, ubungakanani abugcini nje ngokwandisa inzuzo, kodwa kunye nelahleko.
Ukubuyela kumzekelo esiwusebenzisileyo apha ngasentla (inzuzo yombhobho engama-75), ukuba utyalo-mali lwe- $ 1,000 luya kwenza i- $ 750 kunye ne-100: 1. Ke, ukuhamba kwe-10pip ngokuchasene nomrhwebi kuya kuba njalo Ixabisa i $ 1,000. Njengoko ubona, oku kubeka inkcitho yakho yokuqala emngciphekweni omkhulu.
Ungayikhetha njani iMini okanye iMicrosoft Forex Broker Account
Ngabantu abaninzi nangakumbi abakhetha ukurhweba kwimarike ye-forex, indawo ye-intanethi ye-intanethi iye yancintisana kakhulu. Kananjalo, ngoku kukho amakhulu eenkampani ezibhidayo ukubonelela ngeenkonzo zazo zokuthengisa kwiindawo zentengiso.
Iindidi ezinkulu kangaka ziindaba ezimnandi kuwe njengomtyali mali, njengoko zikuvumela ukuba ukhethe umthengisi omncinci okanye omncinci we-forex ofanelekileyo kwisitayile sakho sokurhweba. Ingxaki kukukhetha kakhulu ezandleni zakho kunokwenza kube nzima ngakumbi ukukhetha umthengisi olungileyo.
Ngale nto engqondweni, senze uluhlu lwezona zinto zibalulekileyo xa ukhetha umthengisi omncinci okanye omncinci we-forex ukuze ahambelane neemfuno zakho.
Ummiselo ukhona ukukhusela kwakho kwaye yinto ebaluleke kakhulu ekukhangelo lwakho lomthengisi we-forex. Umzekelo, bonke abathengisi abasemthethweni base-UK banyanzelekile ngokusemthethweni ukuba babe nelayisensi yokuthengisa yi-FCA.
I-FCA ibalulekile xa kuziwa ekulawuleni nasekukhuseleni imali oyisebenzele nzima kubarhwebi abakhohlisayo. Baqinisekisa ukuba abathengisi be-forex bathembekile, babonakala, kwaye balawula imisebenzi ngokufanelekileyo.
Xa umrhwebi elawulwa ngumlawuli ophambili onje ngeCAFA, ASIC (Australia), okanye iCySEC (eCyprus) - wena njengomtyali mali unokuqiniseka ukuba imfihlo yakho kunye nemali ziyahlonitshwa. Oku kuthetha ukuba unokuba yinxalenye yesikimu sembuyekezo yomrhwebi. Ngenxa yoko, iimali zakho ziya kwahlulwa kwaye zikhuselwe.
Enye ingqwalasela yinkqubo yokufaka imali kunye nokuhoxiswa. Ewe kunjalo, xa usayina kuwo nawuphi na umthengisi izibuko lokuqala lokufowuna kukuxhasa ngeakhawunti yakho entsha yorhwebo.
Uninzi lwabathengisi be-forex abancinci kunye nabancinci baya kubavumela abathengisi ukuba bafake imali ngogqithiso lwebhanki yemveli, nangona oku, kungayi kulungela wonke umntu. Ngapha koko, le ndlela yedipozithi ngamanye amaxesha inokuthatha iintsuku ezimbalwa zokusebenza.
Ngokuchasene noko, ukuba unethemba lokuqala ukurhweba kwangoko eyona ndlela ilungileyo kukufumana i-mini / broker encinci enokukhetha njenge-debit / amakhadi etyala kunye ne-e-wallets ezinje ngeSkrill, iNeteller kunye nePayPal.
Ukusasazeka yenye into ebalulekileyo ekufuneka ucinge ngayo. Ngokusisiseko, ngumahluko phakathi kokuthenga kunye nokuthengisa amaxabiso alo naliphi na iqela lemali ye-forex. Inani leepip phakathi kwala maxabiso limisela ukusasazeka. Ngenxa yoko, sasaza unokwenza umahluko omkhulu xa kufikwa kwisakhono sakho sokwenza inzuzo ethile.
Ukuba ukusasazeka kwe-GBP / i-USD yayiziipips ezi-3, oku kuya kuthetha ukuba utyalomali lwakho luya kufuna ukunyuka ngeepips ezi-3 ubuncinci ukuze ubuyise imali oyikhuphileyo. Kananjalo, ukusasazeka yenye yezona zinto zibalulekileyo ekufuneka ujonge kuzo xa ujonga umrhwebi omncinci / omncinci.
Nanku umzekelo wokusasazeka nje ukucacisa.
Masicinge ukuba uthengisa i-EUR / USD kwi-micro / broker yakho encinci.
Ixabiso lokuthenga ngu-1.2100
Ixabiso lokuthengisa ngu-1.2106
Njengoko besitshilo, ukusasazeka kubonisiwe kwiipips, ke kuya kufuneka uqaphele amanani okugqibela kwixabiso ngalinye.
Kumzekelo wethu, umahluko ngu-6. Oku kuthetha ukuba ukusasazeka kwi-EUR / USD kulingana neepipsi ezi-6.
Kuba sixoxa ngombandela weefizi, kuya kufuneka sithethe ngeekhomishini zorhwebo. Akukho babarhwebi banye abalinganayo, ke iqonga ngalinye liya kuba neefizi ezahlukeneyo (ukuba zikhona).
Ngelixa abanye abarhwebi bevumela abathengisi ukuba bathenge kwaye bathengise ngezibini zangaphambili ngaphandle kwekhomishini, abanye baya kuchaza ipesenti kurhwebo ngalunye olwenziweyo. Xa usebenzisa i-forex broker ehloniphekileyo, amathuba okuba uya kuhlawula ireyithi eguquguqukayo kwintengiso nganye oyenzayo.
Ukuba iarhente yomrhwebi ihlawulisa i-0.4% kwikhomishini yokurhweba kwangaphambili, kwaye uthenga i-2,000 yeerandi yeedola / iUSD, uyakuhlawula i- $ 8 kwikhomishini.
Masithi uvale ukuba i-EUR / USD ithengiswe ngexabiso le- € 2,400- oku kungalingana nekhomishini ye- € 9.60.
Ngethamsanqa, uninzi lwabathengisi abancinci / abancinci be-forex esincomela ukuba singabizi ziikhomishini zorhwebo konke konke.
Inani leZibini zeMali
Ukuba uluhlobo lomrhwebi okhetha ukugxila kwesinye sezibini ze-forex ezinje nge-EUR / USD kunye ne-GBP / USD, ke oku kunokuba kungangqinelani nawe.
Kwelinye icala, ukuba ukhetha ipotifoliyo eyahlukeneyo ye-forex kwaye uthanda ukurhweba iiasethi ezininzi ezahlukeneyo ngaxeshanye- ke iindidi zonikezelo zibalulekile. Abanye abathengisi banokukhetha okubanzi kunabanye.
Ke xa ujonga umrhwebi omncinci / omncinci we-forex broker, kuya kufuneka ufumane enye enokhetho olukhulu kubandakanya i-exotics, abantwana kunye ne-majors. Lonke olu lwazi luya kufumaneka kwiqonga labarhwebi kwaye kunokuba luncedo kakhulu ukwazi ngaphambi kokuzibophelela ngokupheleleyo.
Izixhobo ezikhoyo zoRhwebo
Nawuphi na umrhwebi we-forex uyazi ukubaluleka kokuba usesikhathini kwiindaba zamva nje zezoqoqosho nezemali. Kwesi sithuba ngamanye amaxesha sinokungazinzi, kubalulekile ukuba wazi nantoni na enokuthi ichaphazele intengiso ye-forex.
Umzekelo woku ivoti edumileyo yeBrexit ekhokelele kuninzi lokuvota ukuphuma kwi-European Union. Oku kube nefuthe elibi kwixabiso le-GBP.
Ngaphandle kohlalutyo lweendaba ezisisiseko, ukufunda ngexabiso lembali kunye nedatha kunokuba yinto ebalulekileyo kwimpumelelo ye-forex. Kuya kufuneka ukhethe umthengisi we-forex ngeendlela ezahlukeneyo zezalathi kwiqonga layo.
Ezinye zezona zinto zibaluleke kakhulu koku:
Ukubaluleka kokuba neqela elifanelekileyo lenkxaso kubathengi kuhlala kungakhathalelwanga. Emva kwayo yonke loo nto, kunokubakho ixesha apho unesidingo esikhulu senkxaso kwiakhawunti yakho encinci okanye encinci ye-forex.
Unoko engqondweni, kuya kufuneka ukhethe umthengisi onikezela abathengi uluhlu lweendlela zonxibelelwano. Ezona ndlela zisetyenziswa kakhulu zonxibelelwano ngumnxeba, i-imeyile, ifom yoqhakamshelwano kunye nengxoxo ephilayo.
Ukuba umthengisi wakho we-forex ozikhetheleyo une-24/7 inkonzo yabathengi-ebonisa uhlobo lwe kwimarike Forex, ke luphawu olulungileyo olo.
Ukufumana inkampani yokurhweba ngobukho obunzima kwimithombo yeendaba zentlalo yicherry kwikhekhe. Le yeyona ndlela ilungileyo yokufunda ngamanye amava wabarhwebi kunye nokubamba iindaba zezoqoqosho nezemali zamva nje.
Ungabhalisa njani kwi-Forex Broker
Ukuba ufumene umthengisi we-forex obonelela ngeeakhawunti ezincinci kunye nezincinci, kuya kufuneka ubhalise ngaphambi kokuba uqale ngokurhweba.
Ukuba awukafiki kwinqanaba lokubhalisa okwangoku, nceda unqumle phambili ukuya 'kwiiBarhente zethu eziBalaseleyo zeForex ngeMini neMicrosoft Akhawunti 2021'. Apha sikunike uncedo ngokudwelisa ezinye ezaziwayo kunye abathengisi be-forex abathembekileyo abanikezela ngohlobo lweakhawunti oyifunayo.
Ngaphandle koko, ukuba ufumene eyakho, nceda ufumane apha ngezantsi kwisikhokelo samanyathelo esi-4 malunga nendlela yokungena kwi-forex broker.
Into yokuqala ekufuneka uyenzile emva kokuthatha isigqibo kumthengisi ofanelekileyo kukuya eqongeni kwaye 'ubhalise'. Ukuqala, kuya kufuneka unikezele ngolwazi olusisiseko. Esi sisiqhelo xa usayinela iiakhawunti ezininzi zomthengisi we forex.
Ekuqaleni, kufuneka ufake igama lakho elipheleleyo, idilesi yokuhlala, umhla wokuzalwa, iinkcukacha zonxibelelwano kunye nenqanaba lerhafu. Emva koku, kuya kucelwa ukuba unikezele ngeenkcukacha ezithile zezemali. Kwakhona, kufuneka unikezele olu lwazi yinto eqhelekileyo.
Ngokubanzi, oku kuyakubandakanya ukuba urhola malini, inqanaba lengqesho, kunye nexabiso elifanelekileyo lokuqikelela. Lonke olu lwazi kukunceda umthengisi alungelelanise imveliso echanekileyo kwiimfuno zakho.
Inyathelo 2: Amava okuThengisa kwangaphambili
Kanye nokuma kwakho kwezezimali, abathengisi kufuneka bazi ukuba ngawaphi amava onawo onawo (ukuba akhona). Ukurhweba nge-Forex kubandakanya ukusebenzisa izixhobo zemali ukuze abathengi babenakho ukuvavanya olu lwazi.
Ubungakanani bemibuzo ekufuneka uyiphendulile buya kuxhomekeka kumrhwebi kwaye loluphi uhlobo lotyalo-mali oceba ukwenza kulo
Inyathelo 3: Yazi uMthengi wakho
Ikwabizwa ngokuba yi-KYC, le yinxalenye apho abarhwebi kufuneka baqinisekise ubungqina babo kumthengisi. Le nkqubo iya kufana kuninzi lwabarhwebi. Ihlala ibandakanya ukulayishwa kwekopi yepasipoti yakho okanye ilayisensi yokuqhuba. Ngamanye amaxesha, ityala elisebenzayo okanye ingxelo yebhanki iyafuneka nayo.
Inyathelo 4: Iimali zeDipozithi kwiAkhawunti yakho ye Forex
Nje ukuba isazisi sakho kunye neakhawunti yakho iqinisekiswe ngumthengisi, unokuxhasa ngemali iakhawunti yakho yorhwebo.
Njengoko besichukumisile ngaphambili, abarhwebi abahlukeneyo banikezela ngeendlela ezahlukeneyo zediphozithi. Kwaye ezinye iindlela zokuhlawula zinokuthatha ixesha elide ukwenza ezinye, ke yigcine engqondweni xa ukhetha indlela ofuna ukuyifaka ngayo.
Sivavanya njani ii-Forex Brokers zethu
Uzibuza ukuba siludibanisa njani uluhlu lwethu lweyona mini intle kunye neakhawunti encinci yeakhawunti brokers?
Apha ngezantsi uyakufumana iseti engqongqo yeekhrayitheriya.
Ilayisensi kwaye ilawulwa- Asisoze sicebise umthengisi ongalawulwa ngumzimba omnye. Oku kuya kubandakanya umnikezeli welayisensi onje nge- FCA, ASIC, okanye iCySEC.
Iikomishini eziphantsi - I-Zero okanye ikhomishini ephantsi yabarhwebi be-forex yile nto siyifunayo.
Ukukhethwa kweeMpawu zezoBugcisa - Izixhobo ezingakumbi zokurhweba ezikhoyo, kokukhona uya kufunda.
Iidiphozithi ezininzi kunye nokukhetha ukuRhola - Ngokuya kubaninzi ngokuya kubamnandi.
Ukusasazeka okungqongqo - Sifuna ukuba wenze imali eninzi kangangoko.
Ukwahluka ngambini kwamanani Ukuba nolukhetho olubanzi lwezibini zemali onokukhetha kuzo kunika abathengisi ithuba lokwahlula iipotifoliyo zabo
Indawo yokuThengisa iWebhusayithi- Iqonga elicacileyo, elifutshane ekulula ukuhamba kulo libenza lula ubomi kubarhwebi
Inkxaso enkulu yoMthengi - Iqela elifanelekileyo lokuxhasa abathengi lixabiseke kakhulu. Awusoze wazi ukuba uya kuzifumana nini ulungile.
Ke, ngoku uyazi yonke into ekufuneka uyazi malunga neeakhawunti zorhwebo ezincinane kunye nezincinci, kuya kufuneka ufumane umthengisi ofanelekileyo ukuze kwenzeke.
Kukho amakhulu onokukhetha kuwo kwi-intanethi ye-forex broker space, ke sidibanise abanye abathengisi abaphambili be-2021 ukukusindisa ngomsebenzi womlenze.
Ukuthintela nakuphi na ukudideka, nceda uqaphele ukuba abanye babarhwebi be-forex kuluhlu lwethu ababoneleli ngokuthe ngqo ngeakhawunti encinci okanye encinci ye-forex nganye. Kodwa, ziyakwenza ukuba urhwebe ngezibonda ezisezantsi kakhulu. Kananjalo, ziiakhawunti ezincinci / ezincinci kuzo zonke ngaphandle kwegama.
Okwangoku, iqonga le-AVATrade libonelela abathengi ngebhonasi enkulu ye-20% kwii-akhawunti ze-forex ukuya kuthi ga kwi-10,000 yeedola. Ukufumana eyona bhonasi iphezulu, kuya kufuneka uxhase iakhawunti yakho nge- $ 50,000. Ukuba ujonge ukurhweba ngexabiso elincinci, idiphozithi encinci kwi-AVATrade yi- $ 100 nje. Ngayiphi na imeko, iakhawunti yakho ye-AVATrade kufuneka iqinisekiswe ngaphambi kokuba ibhonasi ingene kwiakhawunti yakho.
I-Capital.com ayihlawulisi naziphi na iikomishini konke konke kwaye inosasazo oluqinileyo. Umrhwebi unika amandla ngokuhambelana nezikhokelo ze-ESMA. Umrhwebi ukwalawulwe ngokupheleleyo yiFCA, CySEC, ASIC, kunye ne-NBRB ibonelela ngempahla eninzi yemali.
Ngexesha lokubhalwa, ubungakanani bume kwi-1: 20 kwii-exotic kunye nakubantwana kunye no-1: 30 kuzo zonke izikhundla. Ukuba uhlala ngaphandle kweYurophu okanye ngandlela ithile umthengi ophetheyo, kunokwenzeka ukuba uya kunikwa imida ephezulu. Ukubeka imali kwiCapital.com kulula. Eyona nto ibaluleke kakhulu kuyo, ungaqala ngediphozithi esezantsi njenge-20 $ / £ .Iqonga lamkela zonke iindlela zokuhlawula eziphambili ezinje nge-e-wallets, ikhadi letyala / lokuthenga, kunye nokudluliselwa kwebhanki yocingo.
'Ininzi' kwintengiso ye-forex ibalulekile ekwenzeni ulwimi lokurhweba lwe-forex phakathi kwabarhwebi kunye nabarhwebi ngokufanayo. Ukuba ungumqali xa kufikwa kurhwebo kwimarike ye-forex, ukusebenzisa i-akhawunti encinci okanye encinci ye-akhawunti ye-forex kuya kunciphisa kakhulu umngcipheko kuwe.
Kubathengisi be-forex abanamava, isuntswana okanye into encinci inokuba yindlela elungileyo yokwahlula iphothifoliyo ye-forex, 'umngcipheko omncinci' wokuziqhelanisa ukuba uyafuna.
Nokuba unamava kangakanani kweyona marike yolwelo emhlabeni, ezi akhawunti zinokukunceda ufumane amava okuthengisa ngakumbi ngemali encinci efunekayo. Njengalo naluphi na utyalo-mali, uyakuhlala ukhona umngcipheko ngaphandle kwesiqinisekiso- ke musa ukwenza impazamo yokulindela enkulu inzuzo.
Ngaphambi kokuzibophelela kwiqonga lomthengisi, kunokuba ngumbono olungileyo ukuzama ezinye iiakhawunti zokurhweba ngedemo. Le yeyona ndlela iluncedo kubarhwebi ukuze bazive benarhwebo kwaye babone ukuba izakusebenza na nesimbo sakho sokurhweba.
Ngaba ukhona umahluko phakathi kweakhawunti encinci ye-forex kunye neakhawunti encinci ye-forex?
Ewe. Ngelixa zombini zivumela amashishini amancinci kukho umahluko phakathi kweeakhawunti ezimbini. Ukubeka ngokulula, iqashiso leMicro ziiyunithi ezili-1,000-oko kuthetha ukuba iqanda elinye elincinci liyi- $ 1 ngombhobho. Amaqashiso amancinci ziiyunithi ezingama-0.10 10,000, ngoko ke 1 mini iqashiso yi- $ 1 ngombhobho.
Ngaba iiakhawunti ezincinci nezincinci ze-forex zilungile kubaqalayo?
Ewe. Umngcipheko ophantsi kunye nobungakanani bamashishini amancinci enza iiakhawunti ezincinci nezincinci ze-forex ezilungileyo kubathengisi be-forex abangenamava.
Ndifumene iqonga lomthengisi endilithandayo kodwa akukho nto ikhankanyiweyo ngeakhawunti encinci, ndingasasebenzisa le broker?
Mhlawumbi kunjalo. Uninzi lwabarhwebi be-forex luya kwenza ukuba abatyali mali bakwazi ukurhweba ngeeakhawunti ezincinci kunye nezincinci ze-forex, kodwa ezinye azizibhengezi ngokuthe ngqo. Umzekelo, ezinye ziya kunciphisa ivolumu yeakhawunti yakho ibe ziipips eziyi-0,1. Kukho ezinye iindlela zokurhangqa nayo, njengokubonelela ngeedipozithi ezisezantsi kakhulu.
Nawuphi na umrhwebi e-UK uyafunwa ngumthetho ukuba afumane iphepha-mvume lokuthengisa kumzimba olawulayo we-FCA. Oku kuyakuboniswa ngokuzingca kumaqonga asemthethweni abathengi ukuba babone. Ukuba awuphumi e-UK, abanye abalawuli abaphezulu babandakanya i-ASIC (Australia) kunye neCySEC (eCyprus).